I-UCT imemezele ukunyuka kwemali yokufunda | News24
I-UCT imemezele ukunyuka kwemali yokufunda
Johannebsurg - Umkhandlu wenyuvesi, i-University of Cape Town (UCT) imemezele ngoLwesihlanu ukwenyuka kwemali yokufunda kulesi sikhungo ngonyaka ozayo.
Imali yokufunda izonyuka ngo-8%, eyokuhlala ngaphakathi yona izokwenyuka ngo-10% kanti eyokudla izonyuka ngo-12% ngo-2018.
OLUNYE UDABA:Imfundo yamahhala eyabampofu kuphela - ANC
Esitatimendeni, uMax Price oyiSekela likaShansela uthe uphuzile ukwenza lesi simemezelo njengoba ubengakabinaso isiqiniseko sokuba izosebenza kanjani inqubomgomo emenyezelwe ngumengameli.
UPrice ubekhuluma ngesimemezelo sangesonto eledlule sikaMengameli Jacob Zuma semfundo yamahhala ezokwethulwa ngonyaka ozayo kubafundi abazobe benza unyaka wokuqala emanyuvesi, abaphuma emakhaya adla imbuya ngothi kanye nalawo angenisa imali engaphansi kuka-R350 000 ngonyaka.
Lesi simemezelo se-UCT siza ngemuva kwesiphakamiso sokuqala esakhishwa ngoNovemba, esabona kubheduka imibhikisho kulesi sikhungo abafundi bezama ukuphoqa uZuma ukuba akhiphe umbiko kanye nezincomo ezenziwa yiHeher Commission.
Le khomishini yasungulwa nguMengameli Zuma ngo-2016 kulandela imibhikisho eyayithe chithi saka emanyuvesi akuleli. Kwakuhloswe ngayo ukuthola izisombululo mayelana nodaba lwemfundo yamahhala ngemuva kwemibhikisho ye-#FeesMustFall.